Archives manasongadina | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Nanome fihodinana vaovao iray manontolo ny famoronana horonantsary, ary ny fizarana fizarana dia mahatonga ny hetsika fananganana mpihaino ho lasa mampientam-po kokoa ho an'ny mpamorona famoronana. Ny matihanina amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia mitady fomba vaovao hanamboarana votoaty tsara kokoa ary ahafahany miditra mora kokoa amin'ny mpihaino azy io raha mitombo hatrany. Raha nisy ...
Raha ao amin'ny indostrian'ny fahitalavitra ianao, dia fantatrao ny zava-tsarotra amin'ny fanamboarana famokarana mihoatra an'izay fenitra an-tampon'ny famoronana votoaty. Ny fahaiza-mamorona eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao dia mitaky afa-tsy mihoatra ny haben'ny votoaty kalitao rehefa ny valin'ny famelabelarana izay tena betsaka. Izay matihanina mandeha miaraka amin'ny marika ...
Ny orinasa dia nandresy ny fanamby COVID-19 hamindra ny fampielezana ifotony Miaraka amin'ny COVID-19 amin'ny fiovana lehibe amin'ny fomba famokarana amin'ny fahitalavitra, nametraka ny teknikan'ny injeniera sy ny fitantanana mivantana ny hetsika ny PSSI Global Services mba hanaterana ny finiavana Amerikanina iray manam-pahaizana manokana mpijery manerana ny firenena. Noho ny fepetra sy fitsidihana sosialy amin'ny fihaonana lehibe dia tsy afaka nivory tamina iray ireo mpifaninana sy mpitsara ...
Ny sary tsotra dia afaka milaza be dia be, ary ny fahazoana an'izany sary izany dia fanalahidin'ny fifandraisana ilaina amin'ny famoronana hamokatra ary hampitombo hatrany ny mpihaino. Izay matihanina miasa eo amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia mahatakatra fa ny sary ao ambadiky ny atiny am-peo dia afaka miresaka betsaka amin'ireo mpanatrika tadiaviny. Ary miaraka amin'ireo Rafitra Fakan-tsary feno Bame H vaovao, nalefa ...
Ny Streaming Global dia namorona ny fomba handefasana renirano mivantana amin'ny haingam-pandeha amin'ny fampiakarana amboara eran-tany amin'ny fampiasana fotodrafitrasa mahazatra, raha mampidina ny vola mahazatra amin'ny sehatra sy ny mpamatsy serivisy. Ny teknolojia streaminging Global sy voajanahary patanty dia mamadika ny mpizara fitehirizana rahona ho mpizara mivantana be haingam-pandeha tsy misy fametrahana rindrambaiko fanampiny amin'ny mpizara. Izany dia mamela ny fiainana, ny tsipika, OTT, ...
Ny votoaty lehibe no valisoa tsara indrindra azon'ny matihanina matihanina amin'ny alàlan'ny mpihaino azy. Saingy ny famokarana rehetra dia mitaky ny teknolojia mety hananana famelabelarana stellar. Raha afaka mahita fifandraisana mety ny famoronana hampitàna ny votoatiny dia mahatonga azy ireo hahomby kokoa. Izany no antony mahatonga ny indostria manana mpitondra fifandraisana toy ny ...
Ny votoatin'ny matihanina mpitazam-baovao dia miteraka olana, ary ny zava-misy koa izay azo antoka fa fampisehoana lehibe dia ny lozisialy izay famokarana ny asa-tanana avy amin'ny onjam-peo tsy miankina amin'ny herin'ny famoronana fotsiny. Fa ny tsy maintsy ampidirina ao koa, dia ny hardware no manohana ny fanatanterahana ny famelabelarana. Dobaka ao amin'ny Dynamic Drive Pool / Ardis Technologies manokana ao ...
Page 1 ny 17012345 » 102030...Last »